खुल्लामन्च: कांग्रेस : जहाँ संगठन, त्यहिं गुट !
(एक महिना भएछ, ब्लग बाट हराएको । साथीहरुको लेख चाँही अरुको साधन सापट मागेर पनि पढेको थिएं, तर आफु लेख्न कापी र मसि नै पुगेन । यो बिचमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत र कलाकार मनोज गजुरेल संग भेट भयो । त्यो अर्को लेखमा अबश्य राख्नेछु । तर आज म बडो ठुलो नेता बनेर आको छु, यो बिचमा । हा हा !!! राजनीति गर्‍यो भनेर श्राप नदिनु होला । अलि अलि चाख त भैहाल्छ, यो रोगमा । तर आफ्नै आँखा अगाडिको गाइ-जात्रालाई यसो पोतेको छु, हतारमा । )
नेपाली राजनीति र नेपाली कांग्रेसको परिपुरकता बडो अनौठो छ । बि पि लाई जपेर राजनीति थाल्नेहरु कांग्रेस र नेपाली राजनीति परिपुरक हो भन्ठान्लान्, जुन केही हद सहि होला । तर लालशा र चाकरितालाई नैतिकता ठानी कांग्रेस र यसको वरपर 'महाजनका भजन' भट्याउनेहरुले गरेका चारित्रिक राजनीतिले देखाइदिएको छ, कांग्रेसको चालामाला, यसको हालत, भताभुङ्ग संगठन र गुट । संगठन खोलिनु कुनै नौलो बिषय भएन, कांग्रेसलाई । चाहे अमेरिकामा होस् या युरोपमा । मन परेका नेताका 'भनेको मान्ने' मालिक हुनु नयां संगठनको चासो हुन्छ, कांग्रेसलाई । नव निर्मित संगठनको लेखाजोखा र यसलाई मलपानी कहिल्यै मिल्दैन, हेद्क्वारटरबाट । खाली पानारुपी थालीबाट टिका र जमाराहरु चाँही जति चाहिए पनि मिल्दोरहेछ । एउटा कार्यकर्ता अस्पतालको शैयामा भगवान पुकारी रहंदा सुन्दैन, बी पी नगर कसैको बिलौना । जीबनभर कांग्रेस भनेर लडेकाहरु 'कपुत' भएर मरेका छन्, बिचरा । सबैलाई थाहा छ, मर्ने बेलामा दाल भात लिएर शैलाजा भेट्न अस्पताल कोही गएन । शुभकामनाको बडेमान गुच्छा लिएर सुजाता कहाँ लागे, काङ्रेसीहरु । बेसहारा शैलजाको खुस्केको प्राण सम्हाल्ने कोही भएनन् । उनको चिरायूको लागि चितामा चढ्नुपर्ने श्रद्धाको फूल सुजाताको शुभकामनाको लागि टक्रिन्छन । कयौ शैलजाहरु मरेर गए, न फूल त न सम्झना । एउटा कर्मठ कार्यकर्ताले स्वस्फुर्त पुण्यतिथिमा धूप बालेर एकचोटी सम्झिइएका छन्, ती शैलजाहरु । भने, यता जर्मनी झोलामा नेपाली राजनीतिको 'गुट' बोकेर हिडेका छन्, नव नेताहरु । यसैले त बार्दलिमा बसेर झम्-झम झरिमा सुकाएको बिस्कुन हेरेर बसेको छ, आज कांग्रेस । र, चार हल गोरु लिएर बगरमा रोपाइं गर्न हिडेका छन्, यिनका नेताहरु ।
त्यत्रो बर्ष शासन गरेको पार्टीको कार्यलय धन्न मैयादेबीको चन्दाले छाइएको छ । त्यसलाई 'पुर्ण' गर्न अमेरिकामै धेरै चोटि सवार भए, पूर्व मन्त्रीहरु । इमानको राजनीति गरेको हो भने, लाज लाग्नु पर्ने हो तीनलाई, सात समुन्द्र पारी आएर भाडा मांझेर कमाएको पैसा 'चन्दा' माग्नलाई । तै पनि माया न हो, सक्नेले दिए । नसक्नेको र नदिनेका कुरै नगरौं । त्यो चन्दाले छानो छाउन अपुग भएको भए चार वटा पिल्लर मात्रै हालेको भए पनि त हुन्थ्यो होला । त्यो पैसाले त एक ट्रक 'प्रिन्टिङ कागज' किनिएछ, चार ग्यालेन मसी किनिएछ । त्यसैले आजकाल ती खुल्ला पानाको शिरानमा चारतारा मुन्तिर जसलाई मन लाग्यो, त्यसैलाई लेखिएको 'संगठन निर्माण' को चिठि जता ततै छापिएका हुदांरहेछन् । जो नेपाल गयो, चट्ट बी पी भवनको चमेना गृहमा नास्ता खायो, अमेरिकामा जन्मदै गरेको गुट र हराइसकेको एकताको फुर्ती लगायो । एउटा 'प्रेम-पत्र' कोरिदिन अनुरोध गर्‍यो । सुट्केशमा ग्रीन कार्ड भन्दा बढी जगेर्ना गरेर अमेरिका ल्यायो, शुक्रबार बेलुका स्कयान गर्यो, तुरुन्तै गूगल ग्रुपमा 'पेस्ट' गरिदियो । शनिवार बिदा हुनेहरुले हेर्छन्, नेपाली काङ्रेसको आशिर्बादी 'चमेना चिठि', नभ्याउनेले आईतवार । आईतवार पनि नभ्याउनेले फोन मार्फत थाहा पाउछन्, सोमबार हेर्छन । गत महिना आएको चिट्ठीको करामत के सकिएको हुन्छ, अब यो चमेना चिट्ठीको बखान शुरु हुन्छ । आरोप-प्रत्यारोप, इमेली घम्सा-घम्सी । अनी धेरै पहीले प्रवक्ताले घोषणा गरेका चुनाबी मितीको समाप्तिको बिन्दु । नयाँ नेपाली संबिधानको हालत्, प्रबासी कांग्रेसी चर्तिकला, एकताको नाममा युद्ध र बर्खिलाप । अमेरिकामा एकताको यो एउटा साधारण नमुना । प्रवासमा कांग्रेस, स्वस्थानीमा शिवको अङग पतन भए जस्तो । अङग पतन भएका ठाम त धाम भएर रहे, तर जहाँ - जहाँ कांग्रेस, काहानी र गुट ।
जमातले जनमत सिर्जना हुदैन भन्ने कुरा कहिल्यै बुझेन, कांग्रेसले । संगठन निर्माणको युरोपी लम्बि-कहानी किन बेलिबिस्तार गर्नु पर्ला र ? संगठनमा टाउके पशुपतिमा भट्टहरु नियुक्त भए जस्तो । जसरी निर्मल भक्तहरु भट्टहरुले सम्झाएसरी पूजा गर्छन्, भेटी चढाउंछन् । पवित्र मन्दिरमा नित्य पूजा गरि भक्तालुहरु आफ्नो बाटो लाग्छन् । यता, सांझ एक सर्को गांजाको मातमा भट्टहरु भेटी गन्न थाल्छन्, कोही भट्टहरु सुन्दरी समाउंदै डिस्कोमा लडेका भेटिन्छन त कोही मनीग्रामबाट दिनदिनै नेपाली भेटी 'भारत भेज्दै' गरेका । ती भेटी र मुम्बैमा बेचिएकी सोझी बहिनी केटीको एउटै काहानी हुन्छ । तर यहाँ काहानीले होईन, चर्तिकलाले मान्छे चर्चित र ठुलो बन्दोरहेछ । बेचिने चेलीको आवाज कसले सुन्ने ? 'दलाल' झन पावरफुल हुन्छ, अब । यसरी नै घोटिएका कार्यकर्ताहरुको आवाज सुन्दो रहेनछ, कांग्रेस । त्यहि रोग सरेर त होला, कांग्रेस भित्रका ढुन्डिराजहरु हराए, जसले चर्तिकलाको साटो सदैब 'समाजबाद्' मात्र लेखे । बिस्वप्रकाशहरु पाखा लाग्दैछन्, जो सोझो आंखाले देखेको सत्य बोल्छन्, त्यहि लेख्छन् । निर्बाचित गुरुराजहरुको नामै सुन्न छाडियो । यी सबै कुराहरु संगठन भित्रको चाकरी र गुटबादका प्रश्रयहरु न हुन । धेरै बिभाग र डा. हरु भएका जिर्ण अस्पतालजस्तो भएको छ, कांग्रेस । जिवनजल पनि नपाउने दुर्गम स्वास्थ्य चौकी जस्तो, यसको प्रबासी संगठन । जहाँ पियनले अप्रेशन गर्ने गर्दछन । ओखतिमुलो नपाएर मरेको लाशजस्तो बनेको छ, तिनै भट्टरुपी खुराफातहरुले बिग्रदैं गरेको, कांग्रेसको प्रबासी साख ।
राजनीतिमा इमान र पालो हुनुपर्ने र आउने कुरा हुन रे । इमान कमै कांग्रेसीहरुमा होला । फेरी कांग्रेसमा पालो पनि कमैका आएका होलान् । सांचो बोल्नेहरुलाई 'बिद्रोहि'को पगरी गुथाइन्छ, जुन मान पाएका थिए, गगन थापाले । पालो सबैको आउला शायद्, जसरी नरहरी आचार्य सदैब सभापति लड्ने आंट गर्दछन । पन्चायती मान मर्दन र बहुदलको हावामात्र लागेकाले आचार्य जसरी सदैब लड्ने साहस गदैनन । उम्मेद्वारी केबल जित्नको लागि मात्र नहुने रहेछ । आवाज र बिचार मन्थनका लागि गरिने उम्मेद्बारीले 'एउटा राम्रो अर्थ' लाग्दोरहेछ । जसरी कांग्रेस भित्र नरहरीको उम्मेद्वारीले बिचारको नेत्रित्व गर्दछ । तर खुराफातीहरुलाई 'एक चोटि जित्नु र नाम लेखाउनु' माधव दाईलाई 'प्रधनमन्त्री'को रहर जस्तै हुदोरहेछ । दुई पट्टि चार जनाको जमात र मनोनयन खुराफाती राजनीति गर्नेहरुको अनौठो लालशा हुदोंरहेछ । झरिमा गगल्स लगाएर खुराफाती बाटो हिड्दा लाटोले फालेको केराको बोक्रामा टेकिएर 'पिलित्त' लडेको जमात बढी छ, कांग्रेसमा । सुनिएको थियो, सधैं समाजवादको भजन गाउने प्रदिप गिरीलाई खुराफातीहरुले बोरामा पोको पारेर बगरमा मिल्काएका थिए रे । त्यत्रो एतिहासिक आन्दोलनका नेता 'लौह पुरुश्' मा थन्किए, एउटै जिबित संस्थापक बिचरा भट्टराई'बा लाई पारी भित्तामा कुटीमा थन्काइदिएको छ, कांग्रेसले । अवसरको, बिचारको र नेत्रित्वको पालो होइन, इमान हुनेहरुको त बेइमानिहरुबाट बेइज्जती त सत्तोसराप मात्र उपहार दिलाउंछ्, आंफै बुढो कांग्रेस ।
र अन्तमा, अमेरिकाको एउटा उदाहरण । केही बर्ष सम्पन्न भएको प्रबासी कांग्रेसको प्रथम अधिबेशन आफैंमा केराको थामसरी ढलेर दोस्रो अधिबेशनको लागि भनेर कोदोबारिमा बांकी रहेको मकैको ढोंड सरि 'कानुन' मा अड्किएको छ रे । न कुनै गोपनियता, न कुनै तरिका । आपसी झगडा । बालखाहरुले घैया गोडे जसरी '३६ सदस्यिय' तयारी समिती राजाको कामको घाम कुरेर बसेको छ । लाखौं प्रबासी अमेरिकी कांग्रेसीहरुको पत्तो बिना जसलाई मनलाग्दि 'आयातित चिठि'मा झारा टारेर 'कानुनी कान्लो' माथि भुटेको मकै चपाउदै छ रे, शक्तिशाली समिती ! पहीले बनेका र हिजो खुलेका संगठन र तिनका साना माछाहरुलाई बल्छी थाप्दै, पाखामा फ्याक्दै, पशुपतिका भट्टरुपीहरुको सल्लाह र आशिर्बाद थाप्दै अघि बढेको छ रे । 'एकताको खातिर' सानाहरुको आवाज नसुनी 'बिद्रोहि'को सापटी गालि उपहार प्रदान गराउंदै पौडी खेलिरहेको छ रे, अमेरिकी प्रवासी कांग्रेस । हिजो अधिबेशन गरेको समुह, अब गराउन तयारी भएको समुह, हुन्छ र हुन्नको समुह, आरोपीहरुको समुह, लान्छना लगाउने र तयार गर्नेको समुह, चिट्ठी आयत गर्ने समुह, त्यसलाई पेस्ट गर्ने अर्को समुह, भाग नलिने धमास लगाउनेहरुको समुह गरि बनेको आ-आफ्नै तालका डम्फुका समुहरु देख्दा देख्दै, बिद्रोही यी आँखाले किन नभनुन ? बिग्रियो कांग्रेस : जता संगठन, त्यतै आफ्नै गुट !
गोकुल जी यस्तै प्रवितिहरु जता ततै ....बढ्नाले त्यस्ता पाटि र पाटि बाट संचालित ... कुनै पनि कार्य हरु मा ,,,,, कुटवन्दी ....र फुटवन्दी को सस्कार चलिरा'छ नि ...अनि काहा बाट ..कुनै पनि कुरा सफल र पुरा हुनु |
त्यसैको एउटा जलंत उदाहरण - अहिले को राज्य संचालन हो ! म त यो सस्कार सबै पाटि हरुमा उतिकै देख्दछु !